Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Spain Izindaba Ezintsha » ICanary Island yaseLa Palma manje isiyindawo yenhlekelele
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Spain Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Isimemezelo sendawo yenhlekelele sizovumela uhulumeni waseSpain ukuthi enze izigidi zama-euro ezimali zombuso zitholakale ukuxhasa izinyathelo eziphuthumayo eLa Palma, kanti izakhamuzi zaseziqhingini ezithintwe ngumsebenzi omkhulu wentaba-mlilo ziyaqhubeka nokucekela phansi lesi siqhingi.
Isiqhingi saseLa Palma saseCanary Islads saseSpain silindele ifu elinobuthi elivela odakeni lwentaba-mlilo.
Uhulumeni waseSpain uthembisa ukwesekwa kwezigidi njengoba intaba-mlilo enkulu iqhubeka nokucekela phansi iLa Palma.
Manje, izigidi zezinsizakusebenza zombuso zingakhululwa ukuxhasa izinyathelo eziphuthumayo eLa Palma, nalabo abathintwe ukuqhuma.
Uhulumeni waseSpain ukhiphe isimemezelo namuhla, wamemezela ngokusemthethweni eCanary IslandsILa Palma, ehlala ogwini lwaseNyakatho Afrika, 'indawo yenhlekelele'.
Ukumenyezelwa kwendawo yenhlekelele kuzovumela i- Uhulumeni waseSpain ukwenza izigidi zama-euro ezimali zombuso zitholakale ukuxhasa izinyathelo eziphuthumayo eLa Palma, futhi izakhamizi zaseziqhingini ezithintwe ngumsebenzi omkhulu wentaba-mlilo ziyaqhubeka nokucekela phansi lesi siqhingi.
Ngokuvumelana ne Uhulumeni waseSpain okhulumela uhulumeni, uhulumeni wabele iphakethe lokuqala lama- € 10.5 million ($ 12.30 million) ukusiza uLa Palma ngezezimali.
Iphakethe lifaka phakathi u- € 5 million wokuthenga izindlu, kanti enye imali izokwabelwa ukuthenga ifenisha nempahla ebalulekile yasendlini ngemuva kokuthi izinkulungwane zithuthelwe kwenye indawo.
ILava iyaqhubeka nokugeleza isuka kwintaba-mlilo iCumbre Vieja lapho izigaxa zaqala ukuvulwa khona ngoSepthemba 19 ngemuva kwamashumi eminyaka zingasebenzi, zacekela phansi izindlu ezingaba ngu-600 kanye namasonto namasimu kabhanana Isiqhingi saseCanary ithandwa ngabavakashi.